AmaBridgertons - Isizini Sesibili Siqinisekisiwe | Bezzia
USusana godoy | 27/04/2021 14:00 | Izindaba
IBridgertons ibe ngenye yezimpumelelo ezinhle ukuvala unyaka we-2020. Isizini yokuqala ikhonjiswe kuKhisimusi walo nyaka oshiwo ngenhla, namanje ezinyangeni ezizayo abantu basakhuluma ngaleli tulo nabalingiswa balo abasemqoka. Ngakho-ke, ngemuva kwempumelelo enkulu yale ndaba yesikhathi, bekwenzeka kuphela ukulinda isitolimende sesibili.
Vele, bekulindelwe njengoba siphawule kahle, kepha mhlawumbe esingakuthandi kakhulu iningi yilokho UDuke waseHastings ngeke abe kwisizini yesibili elindelwe isikhathi eside. Yebo, ngolunye lukalika kanye nolunye lwesihlabathi, ngakho-ke okwamanje asazi ukuthi konke lokhu kuzokuthinta kanjani ukuphumelela kwengxenye yesibili, esivele isiqalile ukudubula.
1 Isizini yesibili yochungechunge lweNetflix izoba kanjani
2 Uphuma nini uBridgerton isizini 2
3 Ubuso obusha eThe Bridgerton?
4 Kuvalelisa uDuke
Isizini yesibili yochungechunge lweNetflix izoba kanjani
Ngaphandle kokungena kubaphangi, kuyacaca ukuthi enye yezindlela ezisisisekelo ezasenza sathandana nesizini yokuqala kwakuyindaba yothando. UMbusi noDaphne bathandane ngokuphelele futhi badiliza izithiyo ezithile ukuze babe ndawonye.. Babhekene nezinkinga eziningana, phakathi kwazo okwakukhona ukuba nezingane. Kepha akukho okunye esizokuqhubekisela phambili, ngoba bonke labo abangakakuboni okwamanje.
Okwamanje, thina esikwenzile, bekufanele sizuze ngokwazi ukuthi le ndaba enhle izoqhubeka kanjani, kepha kubonakala sengathi ngeke kubenjalo. Isizini entsha ngeke kube ukuqhubeka kwesokuqala, kepha manje izogxila kwelinye lamalungu eBridgerton futhi kuzoba ngumfowabo omdala. Ngoba njengoba wazi ngokuqinisekile, zihlobene nezincwadi. Ngakho-ke, sizobona ukuthi sizivumelanisa kanjani ukuze uDaphne osemncane angabubuli uMbusi wakhe futhi yena. Kubukeka sengathi u-Anthony uzothatha leyo ndima yobuholi futhi uzosijabulisa ngothando olusha nezindaba ezintsha noma izimfihlo.
Uphuma nini uBridgerton isizini 2
Kusesekuseni kakhulu ukuthi ungakhuluma ngokuthi i-Bridgerton isizini 2 izophuma nini. Kusukela ukuqoshwa kwayo kuqalile kule ntwasahlobo. Siyazi ukuthi kunzima kanjani kwesinye isikhathi ukudubula indaba yalesi simo, ngoba yini eqinisekile ukuthi kuze kuphele lo nyaka u-2021 noma mhlawumbe ukuqala kuka-2022, ngeke sibe nezindaba ezinhle phakathi kwezandla zethu. Yebo, kulindelwe ngabomvu kepha lokhu kuzosinika isikhathi sokugaya ukuthi omunye wabalingisi abaphambili ngeke esaba khona kulokho kuqoshwa kwefilimu nasekukhipheni kwayo esikhathini esizayo.
Ubuso obusha eThe Bridgerton?
Kufana nempilo uqobo, abanye bayahamba kanti abanye bafika ngamandla. Yebo, kuma-Bridgertons bekungeke kwehluke. Kusukela noma kunjalo, URegé Jean-Page akekho kubalingisi, kufika uSimon Ashley. Kubukeka sengathi lolu kuzoba uthando olusha luka-Anthony, okungukuthi, izibulo lomndeni. Vele, kubonakala sengathi le ndaba ibuya ilayishwe ngemizwa eminingi nezothando, kanye namandla. Kepha kuyiqiniso ukuthi umdlalo weshashalazi nawo usuya ngokugqama ngendlela engakaze ibonwe ngaphambili. Umxube ongaphezu kokuqhuma osenza sifune ngokwengeziwe ngokubuka kuqala okuncane. Kucatshangwa ukuthi bonke abanye abalingiswa, bomndeni othandeka kakhulu, bazoqhubeka nathi isizini eyodwa futhi. Kepha kuyiqiniso ukuthi ukuze siqiniseke ngokuphelele, kusamele silinde.
Yebo, siyagcizelela kakhulu, kepha ngukuthi ubengumlingisi ophambili futhi njengoba lokhu kungavamile ukwenzeka ochungechungeni oluphumelelayo, ukuxhumana nomphakathi kuphendukele kumlingisi. Ngakho-ke, ku-Instagram sibonile ukuthi uDuke ngokwakhe uvalelise kanjani ngempumelelo yakhe enkulu kuze kube manje. Kubukeka sengathi ubesayine isizini eyodwa kuphela futhi ngenxa yalokho, ngeke aqhubeke nokuba yingxenye, kepha uhlala enamazwi amahle kozakwabo nangomsebenzi omuhle omnike ukuqashelwa umhlaba wonke. Ungathanda ukuthi ibe sesizini yesibili?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Izindaba » AmaBridgertons: Isikhathi Sesibili Manje Sesiqinisekisiwe!
Ungayenza Kanjani Umugqa We-Dumbbell Ngokufanele